Ezi ziinkumbulo ezahlukeneyo kunye nemibala apho iXiaomi Mi CC9e iza kufika | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ezi ziinkumbulo ezahlukeneyo kunye nemibala eya kuthi iXiaomi Mi CC9e ifike kuyo
Zimalunga neentsuku ezintlanu ukusuka intetho esemthethweni yoluhlu olutsha lweXiaomi CC, Eziza kuvela njengemveliso ye- Umanyano olwenziweyo phakathi kweXiaomi neMeitu.
Izixhobo ezibini zokuqala eziza kuthi zimele olu sapho lutsha lwee-smartphones ziya kuba zezi IXiaomi Mi CC9 kunye neCC9e. Ezi zimbini ziye zavuza amaxesha amaninzi ngaphambili, kodwa ngoku ulwazi olutsha malunga neenguqulelo zabo zememori zale modeli yamva nje sele ivelile.
Ukuvuza okutsha kusixelela ukuba iMi CC9e iya kufumaneka kwintengiso 4 GB RAM + 64 GB yokugcina, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 64 GB kunye no-6 GB + 128 GB. Ikwabonisa ukuba iyakuphehlelela kwi-White, Blue Planet, nakwi-Night Prince iinketho zombala e-China. Nangona kunjalo, ayithethi kwanto malunga nezinye izinto kunye neempawu.
Ibhokisi yokuthengisa yeXiaomi Mi CC9
Kwelinye icala, idatha evuzayo ngaphambili iphakamisa ukuba Isiphelo siya kuba sisebenzisa isikrini se-AMOLED esingu-5.97-intshi. Oku kulindeleke ukuba kunikeze i-slim 19.5: umlinganiso we-9 kuba isisombululo se-FullHD + sama-pixels angama-2,340 x 1,080 iya kuba yinto eya kubonelela ngayo. Kwelinye icala inotshi waterdrop ikwabizwa ngokuba yithontsi lamanzi-, apho yayiya kuhlala khona ikhamera yangaphambili ye-megapixel engama-32.
Emqolo wakhe wayeza kudibanisa a I-megapixel engama-582 ye-Sony IMX48 lens enkulu kunye ne-OIS, I-lens ye-8-megapixel ye-engile ebanzi kunye ne-5-megapixel sensor sensor. I-Android Pie iya kusebenza phantsi kwenguqulelo yamva nje ye-MIUI 10 yenkampani yokwenza ngokwezifiso, eya kuthi yenzelwe olu luhlu.
Enye idatha iphakamisa ukuba el Snapdragon 710 Uya kuyinika amandla kunye nebhetri ye-3,500 mAh ngenkxaso yetekhnoloji ye-18-watt ekhawulezayo. Ezinye izinto ekulindeleke ukuba zize kwi-smartphone zibandakanya i-Hi-Res Audio kunye ne-IR blaster. Konke oku kuhlala kuqinisekisiwe. Amaxabiso okwahluka kunye nokufumaneka kwezi kuya kwaziwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ezi ziinkumbulo ezahlukeneyo kunye nemibala eya kuthi iXiaomi Mi CC9e ifike kuyo
Umdlalo weTrone uza kuba nomdlalo omtsha weefowuni ngo-2019
Thatha bonke abakhweli kwiTeksi yoLoliwe kunye neyonwabisayo